Justice et Paix : “mila hofanina ireo hitondrana firenena” | NewsMada
Justice et Paix : “mila hofanina ireo hitondrana firenena”
“Fantatra fa tsy manana ny lavorary izay mitondra eo, fa manaiky hofenoina. Koa ny enim-bolana aorian’ny nahavoafidy azy, tsy maintsy mianatra izay rehetra tokony ho fantany amin’izay hoe mitondra firenena izy.”
Io ny fanazavan’ny filohan’ny Vaomieran’ny eveka momba ny fahamarinana sy ny fiadanana, ny Mrg Rakotondrajao Roger Victor, momba ny fehinkevitra tamin’ny fivoriana tsy ara-potoan’ny mpikatroka Justice et paix, tamin’ny faran’ny herinandro teo, izay niantsoana ny solontenan’ireo kandidà ho filohan’ny Repoblika.
Misy mahay mitondra ny lafiny toekarena, ohatra, fa tsy mahay ny hoe fahaiza-mitarika; ny mahay momba ny fiarahamonina, tsy mahay ny momba ny fampidiran-ketra, ny fifandraisana diplaomatika… Koa manaiky hofanin’izay manampahaizana momba izany mandritra ny enim-bolana izay voafidy eo, na mitondra ny firenena aza, satria tsy manana ny hafenoana.
Takina ny olona matahotra an’Andriamanitra
Takina ho olona matahotra an’Andriamanitra ny filoha, manana fahendrena. Mila faritana koa ny hoe fahendrena, satria samy manana ny fahendrena aminy. Raha hitondra izany ny tena, hita amin’ny fiainana andavanandro ny hoe marina, mahitsy, manaja ny teny nomena, mitandro ny rariny sy ny hitsiny, mampandefitra ny hambom-po, mahay mandanjalanja, mahay mihaino, mahay mifanakalo hevitra, azo iresahana…
Manangana ady raha izao no manova lalàmpanorenana
“Tsy izao no hoe hanovana ny lalàmpanorenana, fa manangana ady izany”, hoy izy. Tokony hatao ao anatin’ny fandaharanasan’izay hitondra eo ny fanaovana izany. Omena fotoana ny olona amin’ny fandinihana azy, ary atao amin’ny teny malagasy mba ho azon’ny olona. Tsy ny rehetra no mahay teny frantsay, indrindra ny mamaky teny momba ny lalàna.